Kobo Aura H2O Edition 2, Kobo ၏ Amazon အသစ် Kindle ကိုတိုက်ခိုက်ရန်လောင်းကြေး eReaders အားလုံး
Villamandos | | စာဖတ်သူများ, Kobo
Kobo သည်အတိုင်းအဆမဲ့အတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင်အမေဇုံနှင့်၎င်း၏ Kindle ကိုကျော်လွှားရန်ဆက်လက်ကြိုးစားနေသည်။ ယနေ့အချိန်အထိစျေးကွက်တွင်အရောင်းရဆုံး eReader ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုရန်၎င်းသည်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်း၊ ကြီးမားသည့်စွမ်းအားနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုဆက်လက်စျေးကွက်ရှိအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဝိသေသလက္ခဏာများကို ဆက်၍ လောင်းနေသည်။ နောက်ဆုံးဥပမာသည် Kobo Aura H2O Edition ကို ၂အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဗားရှင်း Kobo Aura Edition ကို2လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရရှိနိုင်ပါကတစ် ဦး ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုခံစားရန်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံသာမကရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို၎င်းကိုနှစ်နာရီအတွင်းနက်ရှိုင်းသောနှစ်မီတာအထိနစ်မြုပ်စေရန်ပင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ComfortLight PRO ဟုခေါ်သည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်ကအပြာအလင်းနှင့်ထိတွေ့မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှောင်တွင်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေနိုင်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ Kobo ကိရိယာအသစ်ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ပြီးပြီ။ ဒီကိရိယာကိုစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ငါတို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပဲ။
ပထမတစ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့စျေးကွက်ထဲတွင်တွေ့ရသမျှအားလုံး၏အဆန်းပြားဆုံးသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည့် eReader မဟုတ်ပါ။ Amazon သည် Kindle Oasis ၏နောက်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတမင်တကာဂရုစိုက်ပြီးဤ Kobo Aura H20 (2017) ကမပြုလုပ်ပါ။ အဲဒါကိုကျော်လွန်ရန်စီမံခန့်ခွဲ။ အပြင်ဘက်တွင်၎င်းကိုရှေ့ဘက်ရှိစေးကပ်သောရာဘာနှင့်အတူအနက်ရောင်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းများကိုလျှော ချ၍ မသွားစေရန်အတွက်များသောအားဖြင့်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒီရာဘာရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကသိပ်ပြီးမထင်ရှားတဲ့အပြင်မျက်စိကိုတောင်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အသုံး ၀ င်မှုကအနှုတ်လက္ခဏာအားလုံးနီးပါးကိုမြန်မြန်မေ့သွားစေတယ်။
၎င်းသည်အမြဲတမ်းသမ္မာသတိ ရှိ၍ အနက်ရောင်အရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင်ပါ ၀ င်ပြီးအပြာဖြစ်သော power ခလုတ်ပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောအရောင်အရင့်ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင် Kobo သည်စျေးကွက်အတွင်းအရောင်များပိုမိုဖြန့်ချိမည်လားဆိုသည်ကိုအတည်မပြုနိုင်သေးပါ။ အနက်ရောင်၏ဆိုးရွားမှုတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်ပြရန်ပျက်ကွက်။ မရပါ IPX68 လက်မှတ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုရေအောက် ၂ မီတာအတွင်းအများဆုံးမိနစ် ၆၀ အတွင်းနစ်မြုပ်စေခြင်းအပြင်၎င်းသည်သင့်အားစျေးကွက်ရှိအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များနှင့်ခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ Kobo Aura H2O Edition 60 ကိုရေစိုမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲကမ်းခြေ၊ ရေကန်သို့မဟုတ်ရေချိုးကန်သို့သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအကြံပြုထားခြင်းမရှိသော်လည်းရေအောက်တွင်စာဖတ်ခြင်းနှင့်မည်သူမဆိုအတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်အလေးချိန် ၂၀၇ ဂရမ်ဖြစ်သောအလေးချိန်ကိုလျစ်လျူရှု။ မရပါ။ ၎င်းသည်ကိန်းဂဏန်းများအရစျေးကွက်တွင်အကြီးမားဆုံး eReader များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောအချိန်၌ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဟုတ်ပါ။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် Kobo Aura H2O Edition2၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ;
၂၆၅ dpi e-ink ပုံနှိပ်အရည်အသွေးနှင့်အတူ ၆.၈ လက်မအက္ခရာ touchscreen
ရှေ့မီး - ComfortLigth PRO သည်ပြာသောအလင်းထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချပေးပြီးညအချိန်တွင်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်
သိုလှောင်မှုပမာဏ - 8GB ရှိ၍ eBooks ၆၀၀၀ ကျော်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်
ဆက်သွယ်မှု - Wi-Fi 802.11b/ g / n, Micro USB
ဘက်ထရီ - ၁၅၀၀ mAh ဖြစ်သည်
ထောက်ပံ့သောပုံစံများ - တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးထားသောဖိုင်ပုံစံ ၁၄ ခု (EPUB, EPUB14, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR)
ရရှိနိုင်သည့်ဘာသာစကားများ - အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ ဒတ်ခ်ျ၊ အီတလီ၊ ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဂျပန်နှင့်တူရကီ
စိတ်ကြိုက်ပြုခြင်း - TypeGenius - မတူညီသော font အမျိုးအစား ၁၁ မျိုးနှင့် font style ၅၀+
ဤ Kobo ကိရိယာသစ်၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ ၆.၈ လက်မဖန်သားပြင်ဖြစ်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ် format ဖြင့်စာအုပ်များကိုရိုးရာစက္ကူပုံစံဖြင့်စာအုပ်များနှင့်တူညီသောအရွယ်အစားဖြင့်ခံစားနိုင်မည်မှာသေချာသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ComfortLight PRO နည်းပညာရှိပြီးအပြာရောင်အလင်းထိတွေ့မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်ရှေ့မျက်နှာစာတွင်မီးအလင်းရောင်ကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြသင့်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမျက်စိမှုန်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်နာကျင်ခြင်းမရှိစေဘဲအလွန်မှောင်မိုက်သောအခြေအနေများတွင်စာဖတ်နိုင်စေသည်။
ယနေ့ဈေးကွက်တွင်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောဖန်သားပြင်များရှိသည့်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များကိုရှာဖွေရန်မှာပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်း ၆.၈ လက်မဖန်သားပြင်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များကိုခံစားနိုင်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Kobo Aura ကဲ့သို့ကြီးမားသည်မဟုတ်ပါ ၎င်း၏အရွယ်အစားသည် ၆ လက်မဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောမည်သည့်စက်ကိရိယာနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအတွေ့အကြုံများစွာရရှိရန်လုံလောက်သည်.
ထို့အပြင်၎င်း၏ 256ppi resolution သည်စာသားနှင့်ပုံရိပ်များ၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့်အခါ Kobo သည်မသက်သာပါ။ ဤ Aura H20 Edition2တွင်အောက်ပါပုံစံများဖြင့် eBooks ကိုခံစားနိုင်သည်။ EPUB3, EPUB11, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စုစုပေါင်း ၁၁ မျိုးနဲ့အရွယ်အစား ၅၀ အထိရှိတဲ့မတူညီတဲ့ဖောင့်တွေလည်းရှိတယ်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သမျှသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော် Kobo ကိရိယာအသစ်မှဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များသည်စက္ကူပုံစံဖြင့်မည်သည့်စာအုပ်နှင့်မတူအောင် E Ink Carta ဖန်သားပြင်မှရရှိသောအတွေ့အကြုံများကိုမီးမောင်းထိုးပြရမည်။ ထို့အပြင်အလင်းရောင်ဖြင့်စာဖတ်နိုင်ခြင်းသည်စက်ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်မှပေးသောမတူကွဲပြားမှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ခြင်းထက်ပိုသည်။
ကျနော်တို့ကအကြောင်းပြောနေတာပါ ComfortLight PRO အင်္ဂါရပ်သည်အပြာရောင်အလင်းနှင့်ထိတွေ့မှုကိုလျော့နည်းစေသည် ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအလင်းပေါ် မူတည်၍ ထိန်းညှိထားသည့်အတွက်အစဉ်မပြတ်စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ရှင်းပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ပြင်တွင်ဖတ်ပါကအလင်းသည် ပို၍ ပြင်းထန်လိမ့်မည်၊ အမှောင်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်လျှင်အလင်းရောင်အတိုင်းအတာကိုလျှော့ချမည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများမငြိုငြင်နိုင်တော့ပါ။
မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် eReaders အမြောက်အမြားကိုစမ်းသပ်ရန်၊ ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သော်လည်းဤ Kobo Aura H2O Edition2သည်စာဖတ်ခြင်း၊ ရှေ့တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ အမေဇုံရဲ့ Kindle အချို့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့ဒီပစ္စည်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီးဒီဇိုင်းကိုရှယ်ယာချထားမယ်ဆိုရင်အလေးချိန်နည်းသွားမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒီဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုခံစားတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံကအပြုသဘောဆောင်တယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းကိုဘယ်သူကဂရုစိုက်မှာလဲ။
အောက်ပါတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ Kobo Aura H2O Edition 2017 အားဗီဒီယိုဖြင့်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း။
ဤ Kobo Aura H2O Edition အသစ်သည်မည်သူ့ကိုမျှလက်များကြားတွင်ထားရှိသောအရာအားလုံးကိုလျစ်လျူရှုထားရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ထားပြီး၎င်းထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများသည်မည်သူမဆိုသတိမထားမိလောက်သောထိတွေ့မှုကိုပေးသည်။
ထို့အပြင်ဤကိရိယာအသစ်သည်ဤ Kobo Aura H2O 2017 ကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအီလက်ထရောနစ်စာအုပ်ဖြစ်စေရန်အတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောကြီးမားသည့်မျက်နှာပြင်၊ စိုစွတ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ဤနွေရာသီကာလများအတွက်စံပြအရာတစ်ခု၊ သုံးစွဲသူကြားခံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များမှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သောအမြန်နှုန်းအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပျော်တယ်
အကယ်၍ ကျောင်းကဲ့သို့ပင်သူတို့သည် Kobo Aura H2O Edition အသစ်အတွက်နောက်ဆုံးတန်းပေးရန်သင်တန်းပို့ချပါက၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားပြီးထူးချွန်မှုနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်မည်။သို့သော်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အချို့သောကဏ္itsများတွင် Kobo သည်၎င်း၏နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူအောင်မြင်မှုရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒီပစ္စည်းသစ်ဟာ Amazon ရဲ့ Kindle ကိုအပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး e-book အနည်းငယ်ကလည်း A global rating ကိုရရှိဖို့နီးကပ်လာတယ်။
ဤ Kobo Aura H2O Edition2အသစ်သည်တရားဝင် Kobo ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးနည်းပညာစတိုးဆိုင်အချို့တွင်ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ၁၇၉.၉၉ ယူရိုကိုကြည့်ပြီးဈေးနှုန်းအတိအကျမကျပါဘူးသို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသောလက္ခဏာအချို့ရှိသောအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုမမေ့သင့်ပါ။
Kobo Aura H2O Edition2အသစ်ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များမှတဆင့်လည်း fnac.es y kobo.com
ဒီအသစ်စက်စက် Kobo Aura H2O Edition2ကိုသင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။။ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်သို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါ။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကြားရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်အားထက်သန်သည်။
Kobo Aura H2O Edition ကို ၂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kobo Aura H2O Edition2- Kobo ၏ Amazon သစ် Kindle ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်လောင်းကြေးအသစ်
Villamandos ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ငါ Kobo အကြောင်းအမြဲတမ်းသိချင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤမော်ဒယ်၏ကြီးမားသောဖန်သားပြင်နှင့် Aura One တို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးညဥ့်အလင်းသည်အမေဇုံကိုကူးယူရန်အချိန်ယူရသည့်အလွန်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, Kindle Oasis ရဲ့ဒီဇိုင်းကကျွန်တော့်ကိုချစ်တယ်။ ငါအိပ်ရာ၌စာဖတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ထင်သည် (ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်ကဲ့သို့) ၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာတိုးတက်လာတာကိုမမြင်မချင်းကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက် Kindle Paperwhite ကိုစွဲကိုင်ထားတယ်။ တိုးတက်မှုတစ်ခုမှာဥပမာအားဖြင့်ဆိုလာအားသွင်းခြင်း (သို့) ဖန်သားပြင်ကိုတိုးတက်စေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သငျသညျ built-in အလင်းမပါဘဲ EInk display များကြည့်ရှုဘယ်လောက်မှောင်မိုက်သတိပြုမိကြပြီ? သူသည်နည်းပညာကိုများစွာတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သေးသည်။ သူလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
မေးခွန်းတစ်ခု ... Kobo အဘိဓာန်များကော။ ဗွီဒီယိုထဲမှာခင်ဗျားမှာ install လုပ်ထားတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်အကြိုက်တွင်စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်များနှင့်ဘာသာပြန်ရွေးချယ်မှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ အတော်လေး hoot ။
Kobo Aura H2O Edition 2017 ၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ညအလင်းရောင်ကမ်းလှမ်းလျှင်မည်သူသည်ပိုကောင်းသောဒီဇိုင်းကိုလိုချင်သနည်း။
တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော်လည်းဤကိရိယာတွင်မျက်နှာပြင်နှင့်အထူးသဖြင့်အမှောင်ထုအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားစာဖတ်ရန်ကမ်းလှမ်းသောအလင်းတွင်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ငါ EInk ဖန်သားပြင်နှင့်ပတ်သက်။ သင်ပြောသောအရာကိုငါလုံးဝသဘောတူသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဖန်သားပြင်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းထားသောအလင်းများအတွက်မဟုတ်ပါကဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝခံစားရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အဘိဓာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတစ်ခုတပ်ဆင်မထားဘူး။ ဒါ့အပြင် eReader ကို WiFi ကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာမို့ကျွန်တော်မကြာခဏလုပ်တာကမိုဘိုင်းဖုန်းကိုတစ်ခုခုစစ်ဆေးဖို့ပါ။
Andres Majorcan ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာ Kobo Aura One ရှိတယ်။ ဒီ H2O ဟာတူညီပေမယ့် ၁ လက်မလျော့နည်းတယ်။ သို့ဆိုလျှင် ၁၀၀ × ၁၀၀ ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သက်သည်။ ComfortLight သည်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်စိတ်မဝင်စားလျှင်အလင်းကိုသင်လိုချင်သည့်အတိုင်းပိတ်ထားပြီးချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဘက်ထရီကိုချွေတာရန်လည်းပိတ်ထားနိုင်သည်။ ဤ H100O ကို Aura One သို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသောစာမျက်နှာ၏အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Aura One သည်သိပ်မမြန်သော်လည်း၎င်းသည်လည်းမကောင်းပါ။
နောက်ဆုံး e-reader တစ်ခုကိုဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါငါ H2O နှင့် Aura One ကြားတွင်တွန့်ဆုတ်နေသည်။ သင် 7,8″ One လို screen ကြီးတစ်ခုလိုချင်လျှင်အနည်းငယ်ပိုပေးဆပ်သင့်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီစတိုးဆိုင်မှာကျွန်တော့်ကိုယူရို ၂၁၀ နဲ့ရောင်းပြီးသူတို့ဟာမိုက်မဲတာမဟုတ်ဘူး။
ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
အမှန်မှာမူရင်း H2O နှင့်ဒီတစ်ခုအကြားကွာခြားချက်များသည်မများပါ၊ သို့သော်ဥပမာအားဖြင့်သင်၏စာမျက်နှာအကောင့်၏အလှည့်သည်သိသာထင်ရှားပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သောရေထုကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
မင်းလိုပဲယနေ့ငါ Kobo ကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။
ငါထင်တာကတော့ဒီပုံစံကအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမှအပ Aura ONE နဲ့ယူရို ၅၀ လျှော့ပြီးတူညီတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်။ ငါမှာ Aura ONE ရှိတယ်၊ တစ်ခါတလေအိမ်မှာငါမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲဒါကနည်းနည်းကြီးတယ်။
- အဘိဓာန်များ - ပေါင်းစည်းထားသောအဘိဓာန်နှင့်ဘာသာပြန်သူ ၂၀ ခန့်ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရုံဖြင့်လွယ်ကူသည်။
- ဤသို့သောအလေးအနက်ထားသောဘလော့ဂ်သည်ယူရို ၁၇၉ Aura H2O ကိုယူရို ၂၈၉ Kindle Oasis နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်မှာအလွန်ဆိုးရွားသည်။ ၎င်းသည်ယူရို ၅၀၀ Grundig တီဗီနှင့် Samsung ဆမ် ၈၀၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြစ်မည်၊ ၁၅၀၀၀ Seat ၂၄၀၀၀ Audi နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သင်မျှတသောနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက Kindle Voyage နှင့်သွားရန်လိုအပ်သည်။ ပြောစရာများစွာရှိသည်။
- ဤတွင်ကျွန်ုပ်အလိုအပ်ဆုံးအရာမှာကတ်တလောက်နှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ချက်အချို့ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာစာဖတ်ခြင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုများစွာဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား bq မှ Kobo သို့ပြောင်းလဲစေသည့်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သူမျှ kobo ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကတ်တလောက်မရှိ (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ ၅ သန်းကျော်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမေဇုံတွင်ဤမျှမြင့်မားသောကိန်းဂဏန်းများကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူး) ပုံရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအချက်အလက်များနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်အချို့ပေးနိုင်လျှင်၊
- ယခင်မော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိုးတက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ယခင် Comfortlight PRO (သဘာဝအလင်း) အားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသည်။
ဟယ်လို။ ငါသည်ငါ့ Bq ကျိုးပဲ့အဖြစ် Kobo ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါတယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုကိုသိချင်ခဲ့သည်၊ သူသည်သင်ကူးယူပြီးသောစာအုပ်များကိုသင့်အားပေးခွင့်ပြုသလား။ စာအုပ်ကိုသူ့အက်ပလီကနေ ၀ ယ်ဖို့ခွင့်ပြုမှသာအဲဒါကိုမဝယ်ချင်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
epub format နဲ့အကောင်းဆုံး ebook စာဖတ်သူတွေ